Tiigso – MAXAA KA CUSUB ADDUUNKA MAANTA?
Markii laga soo gudbey dagaalkii 2aad oo adduunka, waxaa bilowday dagaalkii qaboobaa, kaasoo u dhexeeyey Labadii xulufo oo la kala oran jirey Nato iyo Warso. Labadaa xulufo ayaa la kala raacsanaa oo adduunka ku tartamayey.
Markii u dhammaaday dagaalkii qaboobaa oo u dhexeeyey labada xulufo waxaa biloowday waji cusub – an yaraynno hubka halista ah, nabadna ku wada noolaanno. Reer Galbeed ha la rooro (heshiiska Ruushka) ayey run moodeen, waxayna bilaabeen inay dhab u soo jiitaan oo soo xeraystaan dalalkii Yurubta Bari oo Ruushka la ahaa xulufada. Markiiba tartankii Bari iyo Galbeed ka dhexeeyey xagga Bariga Dhexe ayuu jeestey.
Illaa Ruush intaas waa isdhisaayey oo sanco cusub oo hub iyo dhaqaale dhisid buu ku jirey, Reer Galbeedna saas ulama socdo. Markay 25 sano ka soo wareegtey heshiiskii laga yeeshay dagaalkii qaboobaa oo 1998 ayey baraarugeen. Ruush maanta heerkee joogaa?
Reer Galbeed wuxuu galay is-eedayn. Ameerikana hadda waxaa madax ka noqday madaxweyne an taagersanayn ururkii Nato. Waxaa xusid mudan in dhaqaalaha Ciidammada Nato ku baxa ay dowladda Ameerika inta badan bixin jirtey.
Ugu dambayn, furayaashii Bariga Dhexe gacmaha Dowladda Ruuska ayey ku soo hareen, dhammaan dalalkii Bariga Dhexena Ruushka xulufaysanayaan maanta.
Su’aal: Wali Afrika ma tashatay, mise iyadu hadba qoladii xarig-jiidka ku adkaata ayey daba istaageysaa?
POSTED IN » ???, Arrimaha Dibadda, Tiigso.com